laacibfm.com » Jose Mourinho Oo Ciyaartoyda Kooxdiisa Tottenham Tababarka U Soo Saaray Iyo Maamulka Spurs Oo War Ka Soo Saaray.
Jose Mourinho ayaa si lama filaan ah u jabiyay sharcigii go’doonka caabuqa coronavirus waxaana la arkay isaga oo ciyaartoyda kooxdiisa Tottenham u soo saaray xarunta tababarka isla markaana shaqada dib u bilaabay.
Waxaa soo ifbaxay muuqaal iyo sawirada ciyaartoyda kooxda Tottenham ee uu Jose Mourinho tababarka siinayay iyada oo ay xataa jibiyeen tilmaantii caafimaad ee ahayd in dadku ay ugu yaraan hal mitir kala foogaadaan.
Hamiga Jose Mourinho ee ah in uu Tottenham u soo saaro Champions League ayaa u muuqda mid keenay in uu waqtiga go’doonka coronavirus uu ciyaartoyda kooxdiisa Spurs uga sii faa’iideeyo in ay xili horeba sii diyaar garoobaan balse waxay taasi halis caafimaad oo wayn ku tahay dhamaantood.
Dalka England waxa uu ka mid noqday wadamada dhibaatada wayn u maraya cudurka covid 19 laakiin Jose Mourinho ayayna taasi joojin isaga oo si toos ah xarunta tababarka kooxdiisa shaqada dib uga bilaabay.
Taageere kooxda Arsenal ah ayaa soo helay muuqaalka ciyaartoyda kooxda Tottenham ee Davinson Sanchez iyo Ryan Sessegnon oo si dhaw isku garab ordaya kuwaas oo jabiyay sharciga kala fogaanshaha bulsho ee taxadarka cudurka coronavirus.
Markii uu muuqaalkani soo baxay waxay kooxda Tottenham qasab ku noqotay in ay war soo saaraan iyaga oo ku dooday in ay ciyaartoyda kooxdoodu ilaalinayaan kala fogaanshaha bulsho ee mitirka ama ka badan.
Afhayeen Tottenham u hadalay ayaa yidhi: “Dhamaan ciyaartoydayadu waxay sii ahaadeen kuwo ixtiraamaya kala foogaanshaha bulsho marka ay banaanka tababarka ku samaynayaan. Waxaanu sii wadi doonaa in aanu fariintan ku qasabno”.
Taageeraha Arsenal ee muuqaalka ciyaartoyda Tottenham ee isku dhawayd markii ay tababarka orodka ah samaynayeen ayaa qoraalkan soo raaciyay: “Maanta ciyaartoyda Spurs iyo macalinku waxay ku tababaranayaan Hadley common (Barnet), xaqiiqdii iyagu naftooda uma samaynayaan wax asxaan/ wanaag ah inta waqtigan lagu guda jiro”.
Ilaa hadda lama oga kooxo kale oo horyaalka Premier league ka dhisan oo garoomada tababarkooda ku soo laabtay inkasta oo ay koox kastaaba ciyaartoyda kooxdeeda kula dadaalayso in ayna qaabkii jidhkooda lumin si ay diyaar ugu noqon karaan kulamada baaqiga ah oo la sugayo in dib loo bilaabi doono.
Laakiin Jose Mourinho ayaan sugin in xataa la shaaciyo waqtiga rasmiga ah ee la soo laabanayo wuxuuna taas badalkeeda sameeyay tababar uu ciyaartoyda kooxdiisa banaanka ugu soo saaray xili lagu jiro go’doonka coronavirus.